Wasiir Fiqi: Waxaan argagixisada leenahay Galmudug Janno ma taalo | Universal Somali TV
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug ayaa sheegay in ay u diyaargaroobeen difaaca deegaanka Bacaadweyne iyo deegaanada kale ee Galmudug.
Wasiirka Amniga Galmudug iyo xubno uu horkacayay oo maalmahaanba ku sugnaa Degmada Hobyo ayaa shalay ciidamo geeyay deegaanada Bacaadweyne iyo Cammaara.
Tani waxay ka dambeysay, ka dib markii maleeshiyada Al Shabaab ay culeys weyn soo saareen deegaanada ku dhow dhow Bacaadweyne iyo Cammaara, dhawr jeerna ay weerareen.
Axmed Macalin Fiqi, Wasiirka Amniga Galmudug ayaa sheegay in Ciidamada Galmudug iyo dadka deegaankaba ay diyaar u yihiin la dagaalanka cadowga.
Wasiirka ayaa xusay in bil ka hor dagaalkii Bacaadweyne ay Shabaabka halkaasi uga carareen meydadka lixdan nin, kuwaa oo qaarkood lagu aasay Bacaadweyne, halka qaarka kalena ay meydadkoodu duurka yaallaan, sida uu yiri.
Wasiirka ayaa dadka reer Bacaadweyne ku ammaanay inay la yimaadeen geesinimo iyo naf hurnimaba, isagoo dadka ku dhaqan nawaaxiga deegaankaasi ugu baaqay in ay ku daydaan shacabka reer Bacaadweyne.
"Waxaan runtii u mahadcelineynaa oo u hambalyeyneynaa reer Bacaadweyne oo noqday qalcadii halganka, geesinimada iyo naf hurnimada." Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri "Waxaan rabnaa dadka ku dhaqan deegaanada ku xeeran Bacaadweyne inay la yimaadaan geesinimada reer Bacaadweyne oo kale. Inay sida reer Bacaadweyne isugu tashadeen, isaga difaacayaan ayna uga baqeynin, welibana ku jebinaya mar kasta, goob kastoo leeskaga horyimaado in dadkoo dhan ay sidaasi u dhiiradaan."
Wasiir Fiqi ayaa sheegay inaanay Janno oolin Bacaadweyne iyo guud ahaan Galmudug, balse uu yaalo halaagga kooxaha argagixisada.
"Waxaan kooxaha argagixisada leenahay meeshaan Janno ma taalo, Galmudug Janno ma taalo, Bacaadweyne Janno ma taalo ee halaagiina yaala, baqtigiinaa yaala, dhaawaciina iyo dhimashadiinaa taala." Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri "Jannada Ilaahay boqol dariiqo oo kale oo lagu doortaa jirta, Janno Bacaadweyne iyo Galmudug laga soo raadinayo waxaan u maleynayaa inay tahay halaagiinii, dadkana inaad kala barataan iyo deegaanada."
Wasiir Fiqi ayaa dhammaanba shacabka reer Galmudug ugu baaqay inay u wada istaaggaan, dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab, ciidankana ay garab istaaggaan.
Kan-xigaTaliye ay toddobaadkii hore dhaawacee...
Kan-horeWasiir Dubbe oo kormeeray dhismaha wa...
59,515,235 unique visits